Hyatt inosimudzira nzvimbo yayo yekuzorora nekutora kweApple Leisure Boka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Hyatt inosimudzira nzvimbo yayo yekuzorora nekutora kweApple Leisure Boka
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kudzoreredzwa kwakasimba kwekufamba kwoumbozha padivi pekuwedzera kwenzvimbo yeHyatt's musika portfolio kunongedzera kune ramangwana kuwana kwekambani.
Hyatt iri kuwedzera yayo yemhando yepamusoro yekutandarira zvipiriso.
Hyatt, iri kuwana Apple Leisure Boka yemadhora 2.7 bhiriyoni.
Apple Leisure inoshanda zana ese-anosanganisira emahotera emahotera akasiyana siyana.
Inotungamira boka rehotera reUS, Hyatt, iri kutenga inoshandisa maresitoreti, Apple Leisure Boka, yeUS $ 2.7 bhiriyoni, ichiwedzera zvipo zvayo zvezororo. Kudzoreredzwa kwakasimba kwekufamba kwoumbozha padivi pekuwedzera kwenzvimbo yeHyatt's musika portfolio kunongedzera kune ramangwana kuwana kwekambani.
Apple Leisure Boka inoshanda zana ese-anosanganisira emahotera emahotera akasiyana siyana, kusanganisira, asi asingagumiri ku, Sunscape Resorts uye Spas padivi peSecrets Resorts uye Spas. Kuwedzera uku kuchawedzera zvinoshamisa hunyanzvi hweHyatt, hwatove wakanyanya kukoshesa pamusika uyu.
Kudzoreredzwa kwekufamba kwoumbozha kunoratidzika kuvimbisa. Maindasitiri anoongorora fungidziro inoratidza kuti husiku hwemakamuri hunotorerwa emahotera emhando yepamusoro (pamisika mikuru makumi matanhatu) ichasangana negore rakakura pagore (YoY) kuwedzera (60%) muna 69.7 kupfuura bhajeti (2021%).
Kudzoreredzwa kukuru kwechikamu cheumbozha chingangodaro kuri kuratidza kuwedzera kwezvose zviri kudiwa nekupihwa zvipo zveumbozha muna2021, uye chiratidzo chinovimbisa chekuwedzeredzwa Hyatt portfolio. Kuwedzeredzwa kweiyo Hyatt's resort inopa kuchaita mushe pamwe nekuwedzera kwekunakidzwa kwekuzorora kwekufamba panguva ye COVID-19 yekudzosa nguva. Nebhizimusi rekufamba bhizimusi rakatemwa kuti rirambe rakadzikira kuti zvioneke, kutora uku kuchabvumira Hyatt kusimbisa chinzvimbo chayo mumusika unotarisirwa kupora nekukurumidza.
Ongororo ichangoburwa indasitiri yakawana kuti 28% yevakabvunzwa pasi rese ikozvino vane yakakwira zvakanyanya (16%) kana yakati pfuurei (12%) bhajeti yemazororo, zvichiratidza kuti pane pachena boka revatengi riri kutsvaga kushandisa yakawedzera pazororo ravo rinotevera.
Kune vamwe vatengi, kukiyinirwa kwenyika uye zvirambidzo zvekufamba kwenyika zvave kureva nguva yakawanda kumba. Izvi zvakatendera kuti kuchengetwa kuitwe uye mabhajeti ekufamba akawedzera kune vamwe. Naizvozvo, vamwe vafambi vanoda kubhadhara zvakawanda, vachitsvaga mabhezari emhando yepamusoro, uye vanomaka chiitiko chakakosha pane yavo inotevera kupona.
Dzazvino dzimba dzekugara dzinoratidza mamwe mahotera atove achiwedzera mapotifomu avo emhando yepamusoro. Nyamavhuvhu 2021 yakaona InterContinental Hotel Group (IHG) ichizivisa hurongwa hwekuvhura chinyowani chemhando yepamusoro yekushambadzira kuti chiwedzere kukura kwayo. Marriott akataura zvakare kuti inotarisira kuwedzera yayo yese-inosanganisira resort resort.
Apple Leisure Boka yatova imwe yevanonyanya kushanyira vashanyi pazororo repakeji muUS, Mexico neCaribbean. Chibvumirano ichi chichawedzera chikamu cheHyatt chekuEurope ne60%, ichiwedzera makwikwi nevanofarira vaMarriott, Hilton neIHG.